प्रतिगमन विरूद्धको आन्दोलनमा प्रवासी नेपालीको भूमिका – NepaliEkta
मानव जब जंगली अवस्थाबाट सभ्य समाजमा प्रवेश गर्यो, त्यतिबेला देखिनै मानिसहरुले समाजमा के गर्न हुने, के गर्न नहुने जस्ता समाजिक नियम–कानुनहरु बनाएर समाजलाई मर्यादित बनाउने कोशिस गरेको देखिन्छ । जस्तो कि खाने पानीको वरीपरी थान बनाउने, पुजा गर्ने चलन थियो र त्यहाँ वरिपरी दिसापिसाव गर्नुहुन्न भन्ने जनचेतना फैलाउने र त्यो क्षेत्रलाई सफा राख्ने गरेको इतिहास अहिले पनि ताजै छ ।
उनीहरुले बालीनाली भित्र्याउनुपूर्व देवतालाई चढाएर मात्र खानु पर्छ भन्ने नियम बसाएका थिए । जस्तो कि मकैको सुत्ला लाग्न थालेपछि नै खान थाल्ने हो भने अवस्था के होला ? यसरी पहिलेका मानिसहरुले समाजलाई एउटा बन्धनमा राखेर सभ्यताको विकासमा अघि बढेको देखिन्छ । त्यसरी यदी कसैले खानेपानीको मुहान वरिपरी दिसापिसाव गरेको खण्डमा उसलाई देवताले सजाय दिने कुरा अथवा विषेशगरी केटाकेटीहरुका कान काटिदिन्छन् भन्ने जस्ता डर, त्रास देखाएर कानुनको पालना गर्न लगाउँथे ।
समाज त्यतिवेला अस्तव्यस्त थियो । यौनको सवाल, खाद्यान्नको सवाल, निवासको सवाल, खेतीपातीको सवाल, पशुपालनको सवाल अत्यन्तै कठिन अवस्थाबाट समाज गुज्रेको थियो । त्यो बेला बनाइएका नियम कानुनहरु कडाईका साथ पालना नगरिएको हुन्थ्यो भने अहिलेको अवस्थामा मानव समाज आइपुग्न अरु धेरै समय लाग्ने थियो । अहिले हामीले देखेका मठ मन्दिर, विभिन्न धर्म, धार्मिक ग्रन्थहरु यी सबै कुराहरु समाजलाई, राष्ट्रलाई वा देशलाई संचालन गर्नको लागि बनाइएका नियम कानुनहरु बाहेक अरु केही होइनन् । त्यसैले लिखित वा अलिखित जुनसुकै कानुनका वा नियमका सर्वमान्य विषयहरुलाई कडाइकासाथ पालना गर्ने वा लागू नगराउने हो भने समाज विनामियोको दाईं जस्तो भद्रगोल वा लथालिङ्ग बन्न जान्छ ।
नियम कानुन बनाउने ठूलो कुरा होइन ठूलो कुरा त त्यसलाई कार्यन्वयन गर्नु हुनजान्छ । एकजना भारतीय लेखकले भनेका छन् ‘हाम्रो देशमा नेता, डाक्टर र बाबाहरु धेरै छन् । त्यसैले देश पछि परेको छ । किनभने उनीहरुले कानुनको पालना गर्नु पर्दैन ।’
हो, भारतमा पनि कानुन बनाउन उनीहरु सिपालु छन् तर कार्यन्वयन पक्ष कमजोर छ । नेता, बाबा, र डाक्टरहरुका आडमा ठूलाठूला अपराधीहरुले पनि उन्मुक्ति पाउने गर्दछन् । त्यो रोग हाम्रो नेपालमा पनि छ । हामीले भन्ने गरेका छौं, हाम्रो देशको संविधान संसारकै उत्कृष्ठ संविधान हो जुन नेपालीहरुले बनाए । हामीले केकानै राम्रो संविधान वनायौं भनेर नाक फुलायौं । तर त्यही संसारकै उत्कृष्ठ संविधानको पालना गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले नै गलत प्रयोग गरे ।
संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधान छ भनेर ढिपि गरेर संविधानलाई कोमामा पुर्याउने काम गरियो । आखिरमा जसलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्ने हो भने लिखित संविधान बनाउनुको अर्थ के नै रह्यो र ? यो त के हो भने परीक्षामा पास हुन नसकेको झोकमा पुस्तक च्यात्ने, खेलमा हारेपछि नेट च्यात्ने, बल फुटाउने, घाँस काट्न नजानेर हँसियाले हात काट्यो भने हँसिया नै भाँचिदिने, बुढाबुढीको कलझगडा भएको रिसको झोकमा घरमै आगो लगाउने जस्तो हो ।
देशको संविधान नमान्ने त्यसलाई च्यातचुत पार्ने खालको सनकको राजनीतिक चरित्र भएको नेतालाई राज्यसत्ता सुम्पनु दूर्भाग्य हो । हो, कसको मनमा को पस्न सकिन्छ र ? मान्छेको मनको कुरा कस्ले बुझ्न सक्छ ? हिजो राष्ट्रियताको नारा दिएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जनताको मन जित्ने कोशिस गरे । हामीले उनले गरेका कैयौं राम्रा कामहरुको समर्थन पनि गरेका छौँ । तर अहिले आएर उनले संविधानलाई नै धरापमा पार्ने जुन असंवैधानिक काम गरेका छन्, त्यसको कडा शब्दमा विरोध गर्दै संविधानको रक्षाको आन्दोलनमा सबै पक्षसँग एकाकार हुनु अहिलेको हाम्रो कर्तव्य हो ।
हामीले देशको यो दयनीय अवस्थामा संसारभरी रहेका नेपाली समुदायलाई नेपालको संविधानको रक्षाका निमित्त देशमा चलिरहेका जनआन्दोलनलाई आर्थिक, भौतिक तथा नैतिक सहयोग गर्न हार्दिक अपील गर्दछौं । र त्यस आन्दोलनले नै हाम्रो संविधानको रक्षा गर्दै नेपाललाई भारत तथा अमेरीकाको कठपुतली बनाउनबाट बचाउने छ भन्ने दृढ विश्वास गर्दछौं । प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्चमा चलिरहेको बहसमा सरकारी वकिलहरुले नयाँ निर्वाचनपछि संविधानमा रहेका नागरिकता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका व्यवस्था परिमार्जन तथा अमेरिकी सहयोग नियोगसँग गरिएको एमसीसी सम्झौता पारित गर्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दाबी गरेका छन् ।
यस कोणबाट हेर्ने हो भने पनि बुझ्न कुनै गाह्रो पर्दैन कि ओलीद्वारा अमेरीका र भारतकको आकांक्षा पुरा गराउनको लागि नै प्रतिनिधि सभा भंग गएिको हो । यसले के देखाउँछ भने अब तेस्रो जनआन्दोलनको रुप दिन प्रतिदिन बढेर गएको छ । यो अवस्थामा सबै बामपन्थी शक्तिहरु, प्रवासी नेपालीहरूको एकै स्वर तथा अग्रगमनका पक्षधर दलहरुको संयुक्त पहलमा नै नयाँ प्रतिगमनलाई परास्त गर्न सकिने छ ।
← महिला हिंसाका विरुद्ध राजधानीमा महिला संगठनहरूको प्रदर्शन र विरोधसभा
राम बहादुर कुँवरको हत्याको आरोपमा एकजना पक्राउ →
3169 जनाले पढ्नु भयो । बुटवल । जातीय समता समाजको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । फागुन ८ र
23528 जनाले पढ्नु भयो । अजय रेश्मी फरीदावाद, १४ फरवरी । मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज अन्तर्गत रहेको
7789 जनाले पढ्नु भयो । धर्मराज शर्मा कोट्टयाम केरला, २१ फेबु्रवरी । मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज कोट्टयाम
9448 जनाले पढ्नु भयो । खिमराज चालिसे (चंडिगढ) बाहिर क्रान्तिकारी, भित्र स्वार्थको भकारी हुन्छ। त्यो नै वर्गीय आन्दोलनमा अवसरवादी हुन्छ।।
3101 जनाले पढ्नु भयो । हैदरावाद (भारत) ।। स्वर्गद्वारी नगरपालिका तापा–७ प्युठान घर भई हाल दाङ भालुवाङको पिपरीमा बसोबास गर्दै